Cuntillistat budada cayriin miisaanka lumay | AASraw steroids
/blog/cetilistat/Cetilistat budada cayriin miisaan lumis
Posted on 11 / 26 / 2017 by 阿斯劳 ku qoray cetilistat. Waxay leedahay 2 Comments.
Waa maxay budada Cetilistat / Cetilistat?
Budada ceeriin ee Cetilistat / Qalabka ceeriin ee Cetilistat waa daawo loogu talagalay in lagu daaweeyo buurnaanta. Waxay u shaqeysaa si la mid ah sida daroogada duugga ah orlistat budada iyadoo la xakameynayo lipase pancreatic, enzyme oo jajabisa triglycerides ee xiidmaha. Iyadoo aan la helin enzyme-kaan, triglycerides-ka cuntada ayaa laga ilaaliyaa in lagu hydrolyzed ilaa asiidh dufan bilaash ah oo la nuugi karo waana laga sii daayaa undigestered. Tijaabooyinka aadanaha, budada cetilistat ayaa la muujiyey inay soo saarto miisaan lumis la mid ah liiska. Waxay keentaa miisaanka oo yaraada waxayna nuugtaa dufanka cuntada. Daroogadu waxay u shaqeysaa dhinac ahaan si loo yareeyo rabitaanka cuntada, iyada oo aan saameyn ku yeelan maskaxda.
magaca Cetilistat, budada Cetilistat, Cetilistat budada cayriin
Formula kelli C25H39NO3
Miisaanka kelli 401.58
Dhibicda Biyaha 72-76 ℃
Saxid Kaydinta. 2-8 ℃
Colour Caddaan cad ama midab cad
Saamaynta Cetilistat budada cayriin / Saameynta Cetilistat
Cayilka ayaa ah ba'an casri ah oo ku yimid waddamada warshadaha iyo kuwa soo koraya, haddana miisaankoodu aad u sarreeyaa iyo cayilku wuxuu sababaa dhimasho badan oo adduunka ah oo ka badan kuwa aan hoos u dhicin. Dufanka Cetilistat waxaa loo tixgeliyaa nooca lipase inhibitor daawo. Daawada waxay ku shaqeysaa adigoo xiraya xayawaanka dufanka ku jirta cuntada si aanad u dheefin iyo dufanka aan dufanka lahayn waxaa lagu gudbin doonaa jidhka mindhicirka. Kaadadan waa in loo isticmaalo kaloori yar, cunto yar oo dufan leh iyo barnaamij jimicsi habboon si loo daaweeyo cayilka. Hoos u dhigidda qaadashada kaloriyada iyo dayactirka culeyska ayaa kaa caawin karta kahortagga iyo daaweynta xaaladaha sida kolestaroolka sare, sonkorowga, dhiig-karka iyo cudurada wadnaha.
Qiyaasta kiniiniga Cetilistat qoyaan / Qiyaasta Cetilistat
Dufanka Cetilistat waxay ku timaadaa foomka kaabsoolka iyo maaddada daawada ee mid waliba waa 60mg. U tag dhakhtarkaaga ka hor intaadan u isticmaalin dawadan si aad uga hesho talooyin ku saabsan miisaanka miisaanka iyo sidaa daraadeed qiyaasta saxda ah ayaa loo xisaabin karaa. Kufsiyada waxaa la qaadaa afka oo dhan oo la liqaa galaas oo buuxa. Bukaan-socodka ayaa guud ahaan loo sheegaa in ay qaataan raashin si ay uga hortagto dufan kasta oo la cuno oo la nuugo. Xaaladaha oo dhan, bukaanku waa in ay si adag u hoggaansamaan habka qiyaasta daawada ay bixiso dhakhtarkooda oo ay hubiso in qiyaasta ugu badan ee aan la dhaafin marka la sameynayo sidaas ay u kordhin karto halista saameynaha.
Saameynta caleenta cayriinka cetilistat caleenta / saameynta dhinaca Cetilistat
Haddii budada cayriin cetilistat la qaado, waxaa laga yaabaa inay waxyeello u keento dhibcaha:
Digniinta budada cayriin cetilistat / Digniinta Cetilistat
Dufanka cetilistat-ka ah wuxuu saameyn karaa nuugista fitamiinada laysku qurxiyo iyo weliba noocyada nafaqooyinka qaarkood.
Isticmaalka cuntooyin badan oo leh cuntooyin dufan badan ayaa kordhin kara halista saameynaha.
Testosterone propionate propionate: faa'iidooyinka iyo saameynaha ay tahay inaad ogaato!	Haweenku ma qaadan karaan Primobolan (Methenolone Acetate)?